OutWiker, ngwa dị mma iji chekwaa ihe edeturu | Site na Linux
OutWiker, ngwa dị mma iji chekwaa ihe edeturu
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ngwa inwe ike chekwaa ihe edeturu, ka m kọọrọ gị ntakịrị ihe Ọpụpụ nke Ihe odide ya bụ na echekwara ndetu n'ụdị akwụkwọ ndekọ aha na faịlụ ederede.
Na OutWiker enwere ike itinye ọnụ ọgụgụ faịlụ na aka ike ọ bụla na ederede ọ bụla, ihe omume-enye gị ohere dee ndetu iji dị iche iche notations: HTML, wiki, Markdown (ma ọ bụrụ na ndị kwekọrọ ekwekọ ngwa mgbakwunye arụnyere).
Na mgbakwunye, site na iji plugins, ịnwere ike ịgbakwunye ikike ibipụta usoro LaTeX na ibe wiki wee tinye ngọngọ koodu yana mkpụrụokwu iji agba maka asụsụ mmemme dị iche iche.
Nke njirimara ya ndị na-esonụ kwụpụta:
A na-echekwa ebe nchekwa data ahụ dị ka osisi ndekọ na diski.
Njikọ ngwa mgbakwunye.
Enwere ike itinye faịlụ ọ bụla na faịlụ ọ bụla.
Peeji nwere ike ịbụ ụdị dị iche iche.
Enwere ike itinye foto dị na peeji HTML.
HTML syntax pụta ìhè.
Nkwado ibe edokwubara.
Enwere ike imeghe alaka osisi ọ bụla dị ka wiki dị iche.
Oyiyi maka ndetu.
Multiplatform (Windows na Linux).
Mbugharị. Mmemme niile ntọala nwere ike ịchekwa gị ndekọ.
Meghee usoro ihe omume.
Ike ịmepụta njikọ n'etiti ibe.
Nchọta ụwa na ndetu gị ma chọọ site na mkpado.
Ogbe ọrụ na aha mmado.
1 Xdị 3.0
2 Etu esi wụnye OutWiker na Linux?
N'oge na-adịbeghị anya a mara ọkwapụta nke ụdị ọhụrụ nke OutWiker 3.0 n'ime arụ ọrụ iji melite eserese njirimara eserese ọ bụkwa na dịka ọmụmaatụ, ọ pụtara na e megharịrị ogwe ngwaọrụ ahụ, yana ntanetị iji họrọ akara ngosi akara agbakwunyere, yana ntanetị mmapụta mgbe ịpị akara na ntanetị ọhụụ mgbe ị na-ahọpụta mgbọrọgwụ nke ndetu osisi.
Mgbanwe ọzọ nke pụtara na nsụgharị ọhụrụ bụ nke ahụ aha aha agbakwunyere (mgbe aha ngosi ngosi edeturu na aha ndekọ aha ebe edere ya), gbakwunyere ugbu a ka o jiri agwa ọ bụla na aha ndetu (ejiri aha eji eme ihe maka ọrụ a).
Ọzọkwa ekwuru na onye nhazi ihe omume emezighariala. Ugbu a, OutWiker na Windows nwere ike ịwụnye na-enweghị ikike nchịkwa ma ọ bụ na obere ọnọdụ, yana ịhọrọ plugins ndị dị mkpa n'oge nrụnye.
Nke mgbanwe ndị ọzọ na-apụta ìhè nke ọhụrụ version:
New interface iji gosipụta peeji nke ụdị a na-amaghị ama (bara uru ma ọ bụrụ na ịhọrọ aka gị faịlụ na ndetu).
Mkparịta ụka emelitere na-ajụ maka idegharị mgbakwunye.
Wiki ọhụrụ nyere iwu ka agba agba ederede ma tinye ụdị omenaala.
Agbakwunyere ikike itinye ihe na wikinotes.
Agbakwunye mgbakwunye mgbakwunye maka ibe dị ugbu a.
Agbakwunyere ihe ntụgharị $ ọhụrụ ọhụrụ na faịlụ ụdị ibe.
Gbakwunyere uzo ohuru.
Gbakwunye mpaghara German.
Gbanwere ụzọ iji chekwaa akara ngosi ọkọlọtọ na ndetu.
Usoro mgbakwunye gbanwere.
Akwaga na Python 3.x na wxPython 4.1.
Agbakwunyere ikike ịhọrọ ọnọdụ nke ederede ọhụrụ na ndepụta ndetu.
Agbakwunyere ntọala maka ndebiri aha peeji ọhụrụ (ọ dịwanye mfe idobe akwụkwọ akụkọ na OutWiker, na ndabara aha ndetu nwere ike ịgụnye ụbọchị ugbu a).
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịkpọtụrụ nkọwa na njikọ na-esonụ.
Etu esi wụnye OutWiker na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye ngwa a na sistemụ ha, ha kwesịrị ịma nke ahụ E nwere ụzọ abụọ dị mfe ị ga - esi nweta OutWiker.
Nke mbu bu site na nchịkọta Snap na naanị ị ga-emepe ọnụ, nwee nkwado mgbakwunye iji wụnye ụdị nchịkọta na pịnye na ọnụ na-esonụ:
Ugbu a, nke abụọ O yitere, naanị na nke a, ị ga-enwerịrị nkwado iji wụnye ngwa flatpak na flathub:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » OutWiker, ngwa dị mma iji chekwaa ihe edeturu
Obi abụọ dijo
Ma ma ọ gakọrịta, yabụ, ọ bụrụ na m wụnye ya na kọmpụta abụọ dị iche iche, mana ha abụọ na-arụ ọrụ n'otu netwọkụ, m ga-enwe otu ndetu na kọmputa abụọ ahụ?
Ihe omume ahụ dị n'asụsụ Spanish? Ọ bụ na na weebụsaịtị gị, ọ naghị etinye otu n'ime ihe m na-ajụ.
Mmemme abụọ yiri nke na-aga nke ọma yiri m ịbụ Zim na QOwnNotes, otu maka gtk na ọzọ maka Qt. Ha abụọ dị ezigbo mma.
Nke a na ọ dịghị ka ihe ọjọọ ma interface ụdị anya nnọọ ochie.
Ha chọpụtara ngwangwa nke na-enye ohere nsuso onye ọrụ, ọbụlagodi ma ị jiri Tor
Zulip 4.0 rutere na mmelite nke ikikere na ọrụ maka ndị ọrụ